Ny mpitarika ny Nosy Cayman dia manome vaovao farany momba ny fitomboan'ny serivisy ataon'ny governemanta
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao ao amin'ny Nosy Cayman » Ny mpitarika ny Nosy Cayman dia manome vaovao farany momba ny fitomboan'ny serivisy ataon'ny governemanta
Cayman Islands ny mpitarika dia nanome fanavaozam-baovao momba ny fampitomboana ny serivisim-panjakana izay efa azon'ny besinimaro isan'ny Cayman, ary koa ny famatsiana teboka 10 WiFi izay hanome fidirana maimaimpoana 24/7 manerana ireo nosy telo.
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany (talata 23 jona 2020), izay notarihin'i Rev. Audley U. Scott, ny mpitarika ny Cayman dia nanazava ny tolotr'asa naparitaky ny governemanta ankehitriny, indrindra ao amin'ny sampandraharaha misahana ny fahasalamana (HSA) sy ny minisiteran'ny Varotra, ny drafitra ary ny foto-drafitr'asa. Nampahafantarin'izy ireo koa ny "Time Travel" izay hanampy amin'ny dia iraisam-pirenena mankany sy avy any amin'ny Nosy Cayman raha mbola mihidy ny sisin-tany.
Ny valiny androany dia 451 ny ratsy ary tsy misy ny tsara.
Ny totalin'ny fitsapana natao tany amin'ny Nosy Cayman dia 21,282.
Amin'ireo totalin'ny 195 hatreto dia mbola tsy misy soritr'aretina, 40 asymptomatika, tsy nisy hopitaly ary 154 no tafaverina.
Miisa 140 izao no ao amin'ny tobin'ny governemanta mitokana ary 166 no mitoka-trano.
Olona enina no nanatrika ny 'tobim-panafody omaly niaraka tamin'ny soritr'aretina malemy' ary fito amin'ireo antso 24 ho an'ny 'hotline flu' no voan'ny gripa.
Ny fitsapana dia nanambara fa ny lisitry ny fironana dia tena mampahery sy antenaina hitohy.
Tsy manantena ny firongatry ny fitomboan'ny isan'ny positives izy satria manokatra indray isika. Ny vondrom-pitsaboana dia mahita ny rambon'ny aretina taloha teo amin'ny tranga tsara hita ankehitriny; tsy misy aretina vaovao.
Ny fitsapana immunoglobulin vaovao natomboka hatreto dia nampiseho fihenan-tsolika ambany dia ambany tokoa amin'ny zavatra tsara fantatra any amin'ny Nosy Cayman.
Ny valim-panadinana dia mitohy mihombo hatrany amin'ny "tena mampino", manasongadina fa ny paikadim-panjakana ampiasaina hatreto dia mandeha tsara, izay miteraka fahatsapana fanantenana sy fampaherezana lehibe manodidina.
Ny dingana 1 amin'ny famerana ambaratonga 2 dia midika fa olona marobe izao no miverina miasa. Izany dia mampitombo ny filàna manaraka tsara ny fepetra rehetra voatondro ao anatin'izany ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ny fanaovana sarontava, ny fanasana tanana matetika ary ny fampiharana ny fahadiovan'ny taovam-pisefoana.
Hifamadika ho Time Travel izao ny Time curfew.
Ny fanamafisana dia niova avy amin'ny "Stay Home Cayman" ho "Stay Safe Cayman".
Ho an'ny fanamarihana feno nataon'ny Premier, jereo ny sidebar etsy ambany.
Ny valin'ny Nosy Cayman dia mitohy mampahery hatrany amin'ny ratsy hatrany amin'ny 1,000 ary tsy misy vokany tsara ao anatin'ny roa andro farany.
Aorian'ny fotoam-panompoana tsara dia hiala ny faran'ny herinandro ho avy ny ekipa mpanampy UK Security.
Raha mila tsipiriany avy amin'ny Governora, jereo ny sidebar etsy ambany.
Ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamana dia nanomboka nanangana drafitra miverina amin'ny famohana ny fandidiana sy ny fitsaboana any ivelany.
Ny tabataba dia tonga tany amin'i Nelson Dilbert sy Walker Romanica tao amin'ny Cayman Distillery noho ny famatsian-dry zareo mpanadio tanana maimaimpoana ho an'ny HSA tato anatin'ny 3 volana.
Mahafantatra ny MRCU ary miasa mafy hiadiana amin'ny fiakaran'ny isa ny moka manerana ny nosy.
Jereo ny sidebar ambany ho an'ny bebe kokoa avy amin'ny Minisitra.
Minisitry ny varotra, ny tetika ary ny fotodrafitrasa, Hon. Joey Hew dia nitatitra:
Fantsona Wi-Fi fiarahamonina Wi-Fi 10 (XNUMX) no hita manerana an'i Grand Cayman, Cayman Brac ary Little Cayman mba hankafizan'ny mponina, fidirana amin'ny Internet amin'ny Internet.
Manohy manome tohana ho an'ireo orinasa bitika sy kely manerana ny nosy ny minisitera.
Ny departemantan'ny varotra sy ny fampiasam-bola dia manohy manome serivisy miavaka amin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera sy amin'ny alàlan'ny asa an-tany lavitra.
Ny mpiasan'ny Departemantan'ny fahazoan-dàlana sy ny mpamily (DVDL), nandritry ny telo volana lasa, dia nanamboatra totalin'ny 10,181 fanavaozana ny fahazoan-dàlana fiara.
Raha mila tsipiriany avy amin'ny minisitra Hew, jereo ny sidebar etsy ambany.
Sidebar: Fotoan-dehibe momba ny dia lavitra, tari-dalana ho an'ny orinasa
Araka ny efa fantatrao tamin'ny Alahady 21 Jona 2020, nifindra tany amin'ny dingana 1 amin'ny famerana ambaratonga 2 isika izay midika ho fanalefahana fameperana bebe kokoa. Midika koa izany fa betsaka kokoa ny olona miverina miasa, ao anatin'izany ireo mpanampy sy mpikarakara, ny fanokafana ny salon sy ny hatsaran-tarehy, ny fiangonana, ny sinema ary ny teatra rehetra afaka manome fepetra hentitra hanalavirana ny fiaraha-monina.
Hatreto, ny tatitra voaraiko dia nampahery rehefa manomboka miasa tanteraka ny orinasa. Koa raha manohy mandroso isika, dia mangataka aminao aho mba hiambina hatrany ary arakaraka ny fanamorana ny fameperana, tompon'andraikitra eo amin'ny fiaraha-monina. Samy nahavita asa lehibe avokoa isika rehetra ary nanao sorona be. Tsy lasa ny viriosy, mbola eo amintsika io ary izany no antony ilaizantsika mitazona ny halaviran'ny fiaraha-monina misy antsika, manaova sarontava na saron-tava mandrakotra eny amin'ny toerana be olona ary manaraka ny fofon'azy.
Ny governemanta dia hanohy ny drafitra andrana amin-kerisetra ary hanara-maso tsara ny valiny rehefa betsaka ny olona tonga eo amin'ny sehatry ny asa ary mivory ara-tsosialy.
Ny torolàlana manokana momba ny indostria dia zaraina amin'ny tranokalan'ny governemanta. Ny torolàlana dia novolavolaina hanohanana ny fanokafana soa aman-tsara ireo faritra marobe ary misy torolàlana momba ny:
Torolàlana momba ny fitaizan-jaza ho an'ny ray aman-dreny sy mpikarakara voalohany;
Miarahaba ny mpikarakara ny zaza hiverina any an-tranonao;
Torolàlana ho an'ny fiasan'ny Ivotoeram-pitsaboana zaza tsy ampy taona, toby fahavaratra, sekoly fampianarana Baiboly fialantsasatra (miverina amin'ny tsipika faha-5 Jolay); SY
Rafitra hamerenana amin'ny laoniny ny fanatanjahan-tena amin'ny 19 Jolay.
Ny torolàlana amin'ny fisokafan'ny fiangonana dia nahazo fanampiana avy amin'ny Fikambanan'ny Minisitra Cayman ary koa ny Fihaonamben'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito ary hita ao amin'ny pejin'ny governemanta.
Ho fanesorana ny fisalasalana dia zava-dehibe ny manamarika fa ireo izay mandeha miangona dia takiana amin'ny fanaovana sarontava ao an-trano.
Rehefa manohy misokatra izahay ary satria maro ny olona any ampitan-dranomasina no mitady hiverina hody dia nanapa-kevitra ny hampiasa ireo olona niara-niasa tamin'ilay fantatra amin'ny anarana hoe Curfew Time mba hifindra monina ao amin'ny vatana vaovao hantsoinay hoe Travel Time.
Miorina amin'ny fahombiazana izay nanampian'ny "Time curfew" ny fanalefahana ny Covid-19 antsika, ny fotoana "Travel Time" vaovao dia hotantanan'ny Lehiben'ny tompon'andraikitra amin'ny varotra iraisam-pirenena, fampiasam-bola, fiaramanidina ary raharaha an-dranomasina, Eric Bush, ary ny ekipa.
Ny Time Travel dia hotendrena amin'ny fandrindrana ny fiverenan'ny Caymanians, ny mponina maharitra ary ny tompon'ny fahazoan-dàlana hiasa any amin'ny nosy Cayman. Amin'izany izy ireo dia hitantana ny toerana fitokanan'ny Governemanta mba hahazoana antoka fa misy efitrano ampy ho an'ireo miverina sy mila mitoka-monina araka izay takiana. Izy ireo koa dia hiasa amin'ny fandrindrana ny fampodiana an-tanindrazana ireo mitady hiverina an-tanindrazana.
Antenaina fa handray ny andraikitra feno amin'ity asa ity ny Travel Time manomboka amin'ny 1 Jolay. Ny fandaminana sy ny fanambarana rehetra natao hatreto dia ny fitsangatsanganana amin'ny nosy Cayman dia hijanona ho iray ihany.
Hatramin'ny 22 martsa 2020 rehefa nanidy ny sisintaninay izahay, ny governemanta dia nandamina sidina fampodiana vonjy maika 30 izay nahafahan'ny olon-tsika nody sy hiverina an-tanindrazana any an-tranony ireo mpivahiny, ao anatin'ny famerana ny fivezivezena manerantany.
Ireo sidina ireo, izay nokarakarain'ny National Emergency Operations Center sy ny Birao Governora, Cayman Airways ary koa ny Biraon'ny Governemanta Cayman Islands any UK, dia nitaky fandrindrana be. Ao amin'ny tontolon'ny Cayman, ny sidina dia tohanan'ny asa lehibe sy mendri-piderana ataon'ny mpiasam-panjakana sy ny mpilatsaka an-tsitrapo hamorona ivon-toerana mitokana ary hitantana ny lojika ilaina amin'ny fanohanana ny fepetra henjana ataon'ny governemanta hampiatoana ny fihanak'ity virus mahafaty ity.
Satria mihodina ny Ivontoeram-pirenena misahana ny vonjy taitra Nasionaly (NEOC) dia miverina amin'ny asany ara-dalàna ny orinasa sy ny olona nifandrindra ny dia maika.
Mandritra ny volana vitsivitsy ho avy, na dia mbola misy fameperana aza isika, ny dia dia mitaky fifandrindrana mifandanja eo amin'ny Minisiteran'ny governemanta, ny manampahefana ambony ary ny firenena hafa amin'ny alàlan'ny Andriamatoa Governora sy ny biraony.
Araka ny efa noresahiko, mba hamoronana traikefa mirindra ho an'ireo olona mila mandeha mankany na avy any amin'ny Nosy Cayman, dia nomeko alalana ny hamorona orinasa vaovao izay handrindra ireo ezaka ireo. Ilay fikambanana vaovao, antsoina hoe "Time Travel", dia hitantana sy handamina ny dia ary hifandray amin'ny besinimaro.
Nandritra ny ezaka rehetra natambatra tato anatin'ny telo volana dia nahavita nihazona ny Covid-19 tsy ho voafehy intsony isika eto amin'ny firenentsika. Saingy tsy afaka miala sasatra amin'ny tombotsoantsika isika. Ny fiasan'ny Travel Time vaovao dia hahafahan'ny governemanta manamora kokoa ny fivezivezena mankany sy miverina ny morontsirintsika ary manohy mitantana amin'ny fomba mahomby ny areti-mandringana Covid-19, nefa tsy tandindomin-doza ny fahombiazantsika mafy.
Sidebar: Ny governora nanamarika ny toerana tsara nananan'i Cayman
Mamporisika ny valin'ny fitsapana indray mandeha indray. Manimba 1,000 eo ho eo tato anatin'ny 2 andro ary tsy misy vokany tsara. Mampiseho fa mandeha ny paikadinay. Tena tsara toerana eto amin'ny Nosinay izahay noho ny fepetra rehetra noraisinay sy ny fiaraha-miasa tsara ataonareo.
Mitatitra ny valanaretina WHO manerantany fa mihamitombo hatrany. Tranga vaovao 183,000 21 tamin'ny 9 Jona - ny avo indrindra tao anatin'ny iray andro hatreto. Tranga 500,000 tapitrisa manerantany. Ary mampalahelo fa efa ho XNUMX XNUMX ny maty.
IZA no nilaza fa tsy misy porofo milaza fa mipoitra ireo karazana virus tsy dia mahery vaika. Tsy nisy na inona na inona nipoitra milaza ny fihenan'ny fifandraisana sy ny fiantraikan'ny aretina.
Izao no nolazaiko mba hanamafisana fa tsy tokony hiambina hatrany isika. Mila manana fahazarana tsara amin'ny halavirana ara-tsosialy isika, ny fidiovana fototra ary ny fitondran-tena tsara (rehefa mikohaka sy mievina) ary manao sarontava amin'ny toerana ampahibemaso.
Izany no fomba tsara indrindra hiarovana ny tenanao, ny fianakavianao ary ny fiarahamoninao, ao anatin'izany ireo zokiolona sy marefo.
Rehefa miasa ny fomba fanokafana soa aman-tsara ny sisin-tany isika dia ilaina ny fifanakalozana ara-barotra. Tsy misy ny vahaolana atahorana aotra. Ka mila mifehezana hatrany isika amin'ny alàlan'ny 'ara-dalàna vaovao' mandra-pivoaran'ny vaksinina.
Handao antsika ny faran'ny herinandro ho avy ny ekipa mpanampy fiarovana (SAT). Roa volana no nahatongavan'izy ireo teto ary tena feno fankasitrahana aho noho ny fanampiana rehetra nomeny. Ny fandrindrana nataon'izy ireo nandritra ny fitsidihan'ny RFA Argus, anisan'izany ny fanatanjahan-tena momba ny rivo-doza sy ny fanampiana angidimby nomena ny RCIPS dia zava-dehibe. Ny ekipa mpiasan'ny rivotra dia nanampy tamin'ny fitiliana ny fandefasana fanafody ary tamin'ny herinandro lasa teo dia namaly ireo kayakà roa sahirana amin'ny morontsirin'i Grand Cayman. Nisy ekipa manam-pahaizana momba ny lozisialy izay nanohana ny laboratoara HSA ary nanome fanampiana amin'ny sidina BA Airbridge. Ary koa, ny tena zava-dehibe, ny ekipa dia nanohana ny fandraisana mpiasa, ny drafitra fanofanana ary ny lalàna ilaina amin'ny fampandrosoana ny Rezimanta Cayman Islands. Ny fampidirana ny ekipa hiditra, miaraka amin'ny fifanarahan'ny Premier, tamin'ny fotoana sarotra taorian'ny fanidiana dia fepetra henjana sy nomanina ary famantarana ny fanoloran-tena any Angletera. Feno fankasitrahana ny ekipa aho noho ny fanampiana rehetra nomeny.
Nangataka ahy ny depiote lefitra mba hanasongadinana, amin'ny fanehoana matanjaka ny fifantohan'ny mpanjifa sivily, fa manomboka anio ny fangatahana ny zom-pirenena britanika any ivelany (BOTC), ny zom-pirenena / fisoratana anarana, ny fisoratana anarana anglisy ary ny famafana ny firaketana heloka bevava dia azo apetraka amin'ny lefitra. Ny biraon'ny governora amin'ny alàlan'ny mailaka sy ny sarany mifandraika amin'izany (vola amerikana na CI, debit, carte de crédit na fanamarinana eo an-toerana) dia azo aloa ao amin'ny biraon'ny paositra. Ny mpangataka dia mila mampakatra ny taratasy fangatahana mifandraika amin'izany, mitsidika biraon'ny paositra, mandoa ny sarany mifandraika amin'izany, avy eo mandefa mailaka ny taratasy sy kopia iray amin'ny tapakila mifandraika amin'izany:
Fanatontoloana / fisoratana anarana BOTC: [email voaaro]
Fisoratana anarana anglisy / Naturalisaion: [email voaaro] (ny scan dia tsy maintsy miloko amin'ny fisoratana anarana anglisy)
Famoahana firaketana heloka bevava: [email voaaro]
Mbola hekena ny kopia sy ny fizahana mafy. Ireo dia tokony hatolotra amin'ireo boaty fitetezana sisin-dàlana ao amin'ny tranom-panjakana fitantanan-draharaham-panjakana.
Sidebar: ny minisitra Seymour dia mampivoatra ny serivisy HSA manitatra
Miarahaba ny mpiara-belona amiko sy ny mpiara-monina amiko.
Araka ny efa fantatrareo, Grand Cayman dia nifindra tany amin'ny Level 2 Minimal Suppression ny valiny COVID-19 ary satria maro taminareo no efa naheno ny Fahefana misahana ny fahasalamana (HSA) dia nanomboka nanangana ny drafitra laharam-pahefana ho an'ny fanokafana indray ny fandidiana sy ny fitsaboana any ivelany. .
Amin'ity dingana ity, ny olona mitaky fikarakarana tsy misy tampoka sy kely dia afaka miditra amin'ny Hopitaly Cayman Islands, ny toeram-pitsaboana rehetra miaraka amin'ny tobim-pahasalamana ao amin'ny Distrika, ny Hopitaly Faith ao Cayman Brac ary ny Little Cayman Clinic.
Fantatry ny HSA fa noho ny fanidiana ny serivisin'izy ireo mandritra ny areti-mandringana dia misy ny fangatahan'ny marary fikarakarana ara-pitsaboana, fandidiana ary ny fomba fitsaboana ary azoko antoka fa omena am-pitandremana sy araka ny tokony izy ny mpiasa ao amin'ny HSA hamaly izany fangatahana izany.
Hisy ny dingana-in an'ny serivisy rehetra manerana ny fotodrafitrasa HSA rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fepetra henjana hiarovana ny marary sy ny mpiasa amin'ny COVID-19 mifototra amin'ireo fitsipika mitarika napetraka. Ireo marary rehetra nisy fanendrena teo aloha dia hifandray amin'ny famerenam-potoana. Raha manana fanontaniana na ahiahy momba ny fanendrena tsy tonga na mila fotoana ny marary dia miantso ny 949-8600. Ny fahasalamam-bahoaka koa dia hanomboka fampielezan-kevitra amin'ny fanaovana vaksiny mandritra ny herinandro ho avy hanomezana fahafaha-mahazo ny marary handray tsindrona fanefitra. Misy ny lisitry ny fepetra fiarovana izay ahitana:
Fisoratana anarana mialoha ny marary rehetra alohan'ny fanendrena azy ireo mba hanamaivanana ny tsipika sy ny fitohanana;
Fizahana mialoha ny marary rehetra momba ny mari-pana sy soritr'aretina COVID-19 alohan'ny hidirany amin'ny tobim-pitsaboana na departemanta;
Ny fiovana amin'ny seza fiandrasana ao amin'ny toeram-pitsaboana rehetra mba hitazonana ny elanelana ara-tsosialy enina metatra farafahakeliny;
Andro natokana ho an'ny toeram-pitsaboana ho an'ireo marary efa antitra sy tsy afa-mihetsika ihany;
Ny klinika sy ny serivisy fitiliana diagnostika dia hapetraka mba hitazomana ny elanelana ara-tsosialy misy eo amin'ny marary, ao anatin'izany ny toerana ivelan'ny trano fanampiny hanitarana ireo toerana fiandrasana;
Fanitarana ny serivisy telemedicine;
Ny rakitsary ara-pitsaboana izao dia azo alaina ao amin'ny birao fampahalalana ao amin'ny atrium hopitaly;
Ny fanaraha-maso COVID-19 dia takiana amin'ny marary rehetra ekena amin'ny fizotran'ny fifidianana (ao anatin'izany ny fizarana C voafidy) 3 andro fiasana alohan'ny fizotrany ary hoentina any amin'ny faritra voatondro.
Misy dingana hafa koa ao anatin'izany ny PPE ho an'ny mpiasa rehetra sy ny fisavana isan'andro ny mpiasan'izy ireo ary koa ny logistika mitandrina mba hiantohana ny halaviran'ny fiaraha-monina. Ho an'ny lisitr'ireo fepetra hafa feno dia mamporisika anao aho hitsidika ny tranokalan'ny HSA azafady.
Fantatray fa maro aminareo koa no manantena ny handre fa afaka manomboka mitsidika olon-tiana koa ianareo ary faly aho milaza aminareo fa handray ny fepetra rehetra ilaina ny HSA mba hanamaivanana tsikelikely ny fameperana ataon'ny mpitsidika ankehitriny, saingy eo ambany fitarihan'ny fahasalamam-bahoaka hisorohana ny ny fiparitahan'ity aretina ity ary miaro ireo marary, mpiasa ary mpitsidika.
Misy ny politikam-pitsidihana izay tokony harahina izay navoakan'izy ireo ampahibemaso, na izany aza, satria mbola misy fanontaniana vitsivitsy faly aho hiara-hamaly azy ireo aminareo rehetra izao:
Ny mpitsidika dia tokony ho 18+ taona ary misaron-tava amin'ny fotoana rehetra.
Ny mpitsidika rehetra dia hojerena alohan'ny hidirany amin'ny Hopitaly Cayman Islands.
Ny mpitsidika rehetra dia asaina manadio tanana rehefa miditra sy mivoaka ny efitranon'ilay marary sy ny hopitaly.
Ny ora fitsidihana dia manomboka amin'ny 11 ora maraina - 8 hariva ho an'ny sampana fitsaboana, fitsaboana ary fitsikerana.
Ireo marary izay mila fanampiana dia mety misy mpikarakara iray ao anatin'ny ekipan'ny fikarakarany.
Ny mpitsidika iray dia avela hiaraka amin'ny marary hanamora ny fikarakarana na ny fitsaboana toy ny fitsidihana amboletra, fomba fitsaboana na fandidiana iray andro.
Mpitsidika iray, isan'andro, no mahazo alalana ao amin'ny Ward Maternity.
Olona roa (ray aman-dreny, mpiambina na mpikarakara) ho an'ny marary ao amin'ny Vondron-jaza
Ny vovo-pitsaboana Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dia mamela ray aman-dreny iray isan'andro.
Ny marary mararin'ny COVID-19 dia TSY mahazo mpitsidika.
Fantatray fa be dia be ny mahatadidy izany, azafady mba matokia koa fa ny ekipan'ny HSA dia miasa amina singa misokatra maro miaraka amin'ny signage izay hanampy antsika rehetra hitety soa aman-tsara ny fanovana.
Amin'ny maha-minisitry ny fahasalamana anao dia faly aho nampahafantatra anao fa afaka mandeha soa aman-tsara any amin'ny hopitaly indray ianao. Ny hopitalinay dia mitantana tsy tapaka areti-mifindra ary nametraka fepetra fanampiny hiantohana ny fiarovana ny marary mandritra io fotoana io.
Tsy dia hataoko loatra ny tsy hampiako ny fihetseham-pon'ny ekipako ao amin'ny HSA hampatsiahivana ireo marary sy mpitsidika fa mbola miaina amin'ny areti-mandringana manerantany isika ary hanohy hamily hatrany ilay hafatra hoe isika rehetra dia mila mitandrina mba hiarovana. ny tenantsika.
Androany aho te-hampiditra hiaka mafy amin'i Nelson Dilbert sy Walker Romanica ao amin'ny Cayman Distillery ihany koa ho an'ny famatsian-dry zareo mpanadio tanana maimaimpoana ho an'ny HSA tato anatin'ny 3 volana. Nanadio fanadiovana maherin'ny 5,000 litatra izy ireo. Ny fanomezana dia nanjary ho an'ireo orinasa sy manam-pahefana manerana ny nosy Grand Granday ary koa amponga 55 galona izay lasa tany Cayman Brac.
Ny fanomezana dia nivoaka, saingy tsy voafetra ho an'ireto orinasa ireto ihany:
HSA, RCIPS, Departemantan'ny tontolo iainana, CBC, Port Authority, HMCI, Hotely mitoka-monina, fonja avaratra, fitantanan-draharaha, biraon'ny dokotera isan-karazany ary toeram-pitsaboana tsy miankina, asa soa misy ny sakafo amin'ny kodiarana, ny fiarahamonina mahaolona, ​​ny fiarahamonina homamiadana, ny alika iray isaky ny mandeha, sy ny maro hafa; Medikaly, manamboninahitra, mpiasa an-tsokosoko ary olona tsy tambo isaina; Biraon'ny Protocol sy ny Antenimiera mpanao lalàna ho an'ny fotoam-pivoriany farany.
Misaotra anao nandray anjara lehibe tamin'ity ady tamin'ny Covid-19 ity.
Ho fanampin'izay, fantatro fa maro aminareo no miahiahy momba ny vovoka Sahara izay miparitaka manerana an'i Karaiba. Te-haka fotoana kely hampahatsiahivako ny besinimaro momba ny fanambarana navoakan'ny Sampan-draharahan'ny Toetr'andro momba ny toetrandro izay nilaza fa afaka manantena ny tarehin-javatra manjavozavo manerana ny Nosy Cayman isika mandritra ny 24 ora manaraka. Noho izany indrindra, ny departemantan'ny fahasalamam-bahoaka dia manoro hevitra ny besinimaro fa ireo toe-javatra ireo dia mety hampitombo ny soritr'aretina amin'ny olona voan'ny sohika, ary ireo aretina hafa amin'ny taovam-pisefoana noho ny fiakaran'ny vovoka sy ny fifangaroan'ny zavatra bitika. Ny olona toy izany dia asaina mijanona ao anaty faran'izay betsaka araka izay azo atao mandritra io fotoana io.
Ary farany, nisy tatitra marobe momba ny fiakaran'ny isan'ny moka manerana ny nosy. Mahafantatra ny MRCU ary miasa mafy hiadiana amin'ireo. Ny famafazana ny habakabaka dia nitranga omaly alina namakivaky ny faritra avaratra sy ny Prospect / Red Bay ary hitohy indray anio alina manerana ny faritra Frank Sound sy North Side. Mbola mitohy ihany koa ny famafazana tany any amin'ny faritr'i Whitehall Estates, Snug Harbor, Smith Road, Walkers Road, North Sound Estates ary Bodden Town anio alina.
Moka no miaina betsaka kokoa ankehitriny noho ny onja ambonimbony sy ny rotsak'orana tato ho ato. Soa ihany fa tsy aretina mitondra moka ireo fa manelingelina indrisy.
Te hanome toky amin'ny besinimaro aho fa ny MRCU dia nanadihady sy nitsabo ireo toerana famokarana ary moka mipoitra, manidina ary manaikitra mandritra ny areti-mandringana COVID-19. Nanao izany izy ireo ary ny tena lehibe indrindra dia ny fiantohana fa ny mpiasa sy ny mpiasa dia manaraka ny fitandremana rehetra mifandraika amin'ny loza mety hitranga amin'ny fampitana COVID-19. Niezaka izy ireo ny tsy hamela ny COVID-19 hisy fiantraikany amin'ny serivisin'izy ireo, saingy nisy akony sy nisy fiantraikany tamin'ny asa izany.
Tao anatin'izay tapa-bolana lasa izay, ny programa an'habakabaka dia nanompo ireo nosy telo rehetra rehefa niara-niasa akaiky tamin'ny seranam-piaramanidina sy ny seranam-piaramanidina, ny fiasa izay voakasiky ny COVID-19 ary manao izay azony atao mba hiantohana ny filaminana any am-piasana. Ny fiasan'ny habakabaka sy ny tany dia samy voan'ny rivotra mahery tamin'ity volana ity izay indraindray nahatonga ny fandefasana rivotra tsy ho vita. Na eo aza izany, ary na eo aza ny COVID-19, ny mpiasan'ny MRCU dia niasa teny an-tsaha nanomboka ny tapaky ny volana martsa mba hanao fanadihadiana sy hifehy ny moka. Hanohy hanao izany am-pahazotoana izy ireo mandra-piverin'ireo moka ankehitriny amin'ny sehatra mahazatra.
Eto am-pamaranana dia misaotra an 'Andriamanitra aho ary mivavaka ho an'ny fiarovana feno famindram-po amin'ireo nosintsika ary mampahatsiahy ny fiarahamonina mba hanohy hanao fanajana ny fiaraha-monina, hanasa tanana, hisaron-tava ary hitazona ny tenanareo sy ny zanakareo any an-trano raha marary ianareo.
Andriamanitra anie hitahy antsika rehetra.
Sidebar - Nanolotra fanavaozana ny Minisitra Hew momba ny fandraisana andraikitra amin'ny minisitera, ny toerana fibatana WiFi
Misaotra anao, Andriamatoa Praiminisitra mendri-piderana ary ireo mpikambana hafa ao amin'ny tontonana manome ny fahafahako mizara fanavaozana vitsivitsy avy amin'ny Minisiterako amin'ireo mpikambana eo amin'ny fijerin'ny besinimaro.
Nandritra izay volana vitsy lasa izay, ireo sampan-draharaha sy sampan-draharaha izay apetrako dia nanohy nanome ny ankamaroan'ny serivisy ho an'ny mpanjifanay - an-tserasera na amin'ny alàlan'ny fandefasana lavitra. Nanao raharaham-barotra izahay, fa tsy tamin'ny fomba mahazatra.
Vitsy amin'ireo serivisinay ihany no nahena na najanona noho ny COVID-19. Anisan'izany ireo serivisy ho an'ny olona izay tsy afaka nifindrantsika tamin'ny Internet - fanandramana an-tsoratra sy mitondra fiara ho an'ny DVDL ary serivisy fanoloana eo aloha ao amin'ny Government Administration Building.
Rehefa mandroso ny governemanta amin'ny fanalefahana bebe kokoa ny famerana, tiako ny hanome toky ny olon-tsotra fa eo am-panatanterahana ny drafitra hiverina amin'ny serivisy amin'ny serivisy amin'ny fomba azo antoka isika - na ho an'ny mpiasa izany na ho an'ny mpanjifa.
Alohan'ny hanomezako vaovao farany avy amin'ny sampan-draharaha sy masoivohoko sasany, te-hanambara fandraisana andraikitra vaovao aho manerana ny Nosy Cayman telo misy antsika, izay nateraky ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina / miankina amin'ny fanjakana.
Ny fananana fidirana amin'ny Internet amin'izao fotoana izao, dia manakiana indrindra noho ny hatramin'izay, satria mitaky olona maro kokoa izahay handeha amin'ny Internet hahazoana serivisy tena ilaina. Ity hetsika ity dia hahafahan'ny mpianatra, ny fianakaviana ary na ny tanora mpandraharaha aza miditra amin'ny loharanon-karena an-tserasera sy hifandray amin'ireo namana sy fianakaviana.
Mpiara-miasa maromaro no nanome fotoana, fahaizana ary fitaovana hanatanterahana ity tetikasa ity. Tsy maintsy misaotra aho:
Orinasa teknolojia manerantany Cisco ho an'ny fanomezana ny fotodrafitrasa sy ny haitao teknolojia ho an'ireo toerana mafana Wi-Fi ho an'ny daholobe;
OfReg amin'ny fandrindrana ny tetikasa ankapobeny;
Mpamatsy IT eo an-toerana, Unified Technologies, amin'ny fametrahana ireo fotodrafitrasa informatika rehetra;
Flow C & W, ho an'ny fidirana amin'ny bandwith ilaina;
Ministeran'ny CPI; SY
Sampan-draharaham-panjakana sy sampan-draharaham-panjakana maromaro ho an'ny fanomezana ny toerana.
Ny toerana ipetrahana Wi-Fi eo an-toerana dia ao:
Trano fitantanan-draharahan'ny distrika ao Cayman Brac
Tranon'ny governemanta any Little Cayman; SY
Ao amin'ny Grand Cayman
Tranombokim-bahoaka George Town
Ivotoerana sivily James M. Bodden Sr.
Ivontoerana ho an'ny fiarahamonina avaratra
Efitrano fivorian'ny Fikambanan'ny Seafarer's Association
Ivontoerana ho an'ny vondrom-piarahamonina South Sound
Tranombokim-bahoaka West Bay
Ivon-toerana sivily William Allen McLaughlin
Ny toerana mafana Wi-Fi dia azo alaina efatra amby roapolo ora isan'andro, fito andro isan-kerinandro. Ny toerana mafana rehetra voalaza eto dia mivantana izao, ankoatry ny toerana UCCI.
Ny mpikambana amin'ny besinimaro dia takiana mba hanaraka ny torolàlana momba ny fiarovana sy ny fandavana ny fiaraha-monina rehefa mitsidika ireo toerana ireo.
Averina indray, misaotra ireo mpiara-miombon'antoka rehetra nahatanteraka izany.
Ivotoerana ho an'ny fampandrosoana ny Nosy Cayman
Ny fitodihana any amin'ny faritra portfolio hafa, ny governemanta, amin'ny alàlan'ny Minisiterako, dia manohy manome tohana ho an'ireo orinasa bitika sy bitika manerana ny nosintsika.
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nanome fanavaozana ny momba ny fandraisana ny fepetra fanampiana ataon'ny Governemanta ho an'ny orinasa bitika sy kely, atolotray amin'ny alàlan'ny Ivotoerana Fampandrosoana orinasa Cayman Islands.
Te hanampy an'io fotsiny aho, toy ny omaly 22 Jona:
Fangatahana sivy hetsy sy efapolo (749) no voaray ho an'ny madinika ary kely programa fanomezana. 83% amin'ireo fangatahana voaray rehetra no voahodina hatreto.
Ny sandan'ny fangatahana fanampiana nankatoavina is $ 1,076,000.00. Amin'io vola io, 660,969.41 $ efa azon'ireo mpangataka.
Ho an'ny programa indram-bola zanabola, fangatahana 60 no voaray misolo tena ny 37% amin'ny vola azo eken'ny Cabinet. Fangatahana telo (3) no nankatoavin'ny Cayman Islands Development Bank vao tsy ela akory izay.
Ho fanampin'ny serivisy ankehitriny, raha vantany vao afaka manomboka soa aman-tsara ny serivisy ao an-trano isika - ny Center dia hanome incubator fandraharahana hipetrahana izay ahafahan'ny tompona orinasa bitika sy kely miasa afaka manofa trano maimaimpoana miaraka amin'ireo mpanolotsaina momba ny varotra ho an'ny fitarihana ara-bola sy stratejika.
Departemantan'ny varotra sy ny fampiasam-bola
Teo anelanelan'ny 21 martsa - 17 jona, matanjaka 2,900 Ny fahazoan-dàlana sy ny varotra dia efa namboarina sy navoaka. Anisan'izany ny mihoatra 600 vaovao fahazoan-dàlana ara-barotra sy ara-barotra, izay inoako, dia miresaka ny fahatokisan-tena amin'ny toekarentsika eto an-toerana ary mampiseho fa velona ny fanahin'ny mpandraharaha.
Te hampahatsiahy ny besoimaro aho fa tamin'ny volana martsa dia nafoin'ny governemanta vonjimaika ny sarany fangatahana fahazoan-dàlana hanao raharaham-barotra sy fandraharahana (ho an'ny vaovao sy ny fanavaozana), hatramin'ny 31 Jolay.
Ny saram-barotra farany sy ny fahazoan-dàlana amin'ny lisansa dia navotsotra vetivety ihany hatramin'ny 31 Jolay.
Mbola misy varavarankely ahafahan'ny tompona orinasa bitika sy kely, indrindra, hahazoany tombony amin'ireo fialana ireo.
Te-hilaza ihany koa aho fa ny Birao rehetra - Ny fahazoan-dàlana amin'ny varotra sy ny fandraharahana, ny fahazoan-dàlana amin'ny alikaola, ny faritra ara-toekarena manokana ary ny kaomisiona momba ny sarimihetsika - dia efa miasa.
Misaotra ny ekipa DCI sy ireo mpikambana ao amin'ny Boards tamin'ny valinteny navoakanao nandritra izay volana vitsivitsy izay.
Departemantan'ny fiara sy fahazoan-dàlana amin'ny mpamily
Ny fitodihana any amin'ny DVDL, tao anatin'ny telo volana lasa, ny mpiasa dia nanodina totalin'ny 10,181 fanavaozana ny fahazoan-dàlana fiara.
Amin'io isa io dia fiara 7,873 na fiara 132 / isan'andro no nohavaozina tamin'ny Internet. Porofo izany fa miasa ny rafitra an-tserasera ary tiako ny hampirisika ny olon-tsotra hanohy hampiasa ny sehatra an-tserasera.
Ny DVDL dia hanadio ny rafitra an-tserasera mba hahatonga azy io hahomby kokoa sy ho mora ampiasaina kokoa, miaraka amin'ny fanantenana fa tsy mila miverina any amin'ny birao intsony ireo mpanjifa amin'ny isa hita teo aloha.
Nisy fiara 2,288 XNUMX nohavaozina teo ambonin'ny latabatra ho an'ireo mpiasa tena ilaina sy ireo be antitra.
Ny isan'ny fahazoan-dàlana mpamily nohavaozina ao anatin'io dia 1,686. Mamporisika ny besinimaro hampiasa ny vavahadin-tserasera mpampiasa voasoratra anarana aho.
Ny departemanta dia mamarana ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny fanadinana an-tsoratra sy mitondra fiara ankehitriny, ary holazaina amin'izany ny vahoaka.
Raha mifandraika amin'ny raharaha fandrindrana, ny Sampan-draharahan'ny drafitra dia nandray anjara lehibe tamin'ny fanokafana tsikelikely ny sehatry ny fananganana. Ny mpiasan'ny drafitra dia nanolotra serivisy fanaraha-maso eny ifotony ho an'ireo tetik'asa izay mbola andrasana (mialoha ny fialofana amin'ny lalàna mifehy). Mifindra amin'ny tetik'asa maro isam-pianakaviana sy ara-barotra izy ireo izao rehefa mandeha tsara ireo tetikasa ireo.
Ho an'ny vanim-potoana, 15 Martsa -19 Jona:
Isan'ny fahazoan-dàlana navoaka - 108; sarobidy kokoa $ 44million;
Isan'ny taratasy fanamarinana momba ny fibodoana nomena - 38, sarobidy 59 tapitrisa.
Isan'ny tetikasa nankatoavina - 38, sarobidy 10 tapitrisa
Vita ny fanaraha-maso vita - 663.
Faly ihany koa aho milaza fa niara-niasa tamin'ny Sampan-draharahan'ny Paositra ny departemantan'ny drafitra mba hahafahan'ny mpanjifa mandoa sarany amin'ny paositra telo - seranam-piaramanidina, Savannah ary West Bay. Ireo toerana ireo dia afaka manodina vola sy manamarina ny fifanakalozana amin'ny anaran'ny Departemanta. Te-hisaotra ny Sampan-draharahan'ny Paositra aho noho io fiaraha-miasa io, izay manasongadina ny ezaka ataon'ny mpiasam-panjakana amin'ny fanatsarana ny asa fanompoana safidy ho an'ny besinimaro.
Mikasika ny fotodrafitrasa fotodrafitrasa, nanomboka ny asan'ny arabe mitsikera ny NRA tamin'ity volana ity mba hanararaotana ny fihenan'ny isan'ireo fiara amoron-dalana.
Ny ekipan'ny NRA dia efa nahavita nanangana indray tamin'ny lalana Shedden Road, Harbor Drive ary Crewe Road.
Amin'ny herinandro ho avy dia hanomboka hivoatra izy ireo
Ao amin'ny George Town - North Sound Road (nataon'i Alissa Towers); ary ny Elgin Avenue (avy amin'ny paositry ny polisy),
Faritra Bodden Town - Manse Road, Pease Bay, ary faritra misy ny Breakers; West Bay Road; ary ny ampahan'ny East End avy amin'ny Blowholes.
Eo koa ny asa ho fanitarana ny fihodinana Chrissie Tomlinson sy Rex Crighton Boulevard, izay ho vita amin'ny faran'ny volana jolay.
Ankoatr'izay, ny asa dia kasaina hanombohana amin'ny làlambe mpampifandray seranam-piaramanidina amin'ny herinandro ho avy. Ity dia hampifandray ny lalambe Esterley Tibbetts mankany Sparky Drive hanamaivanana ny fifamoivoizana be amin'ny alàlan'ny valan-javaboary ary hanamorana ny fitohanana mankany amin'ny boriborintany Butterfield ihany koa.
Ny Alarobia tamin'ny herinandro lasa teo dia nanatrika ny fivorian'ny birao NRA tamin'ny alàlan'ny zoom aho ary nifanaiky izahay fa hanohy ny fifantohanay amin'ny fanaovana izay hahatonga ny lalanay ho azo antoka kokoa ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fomba feno arabe feno izay azo atao.
Na izany aza, raha tsy mamela antsika ny habaka dia hanaraka ny fomba fiasa an-dalambe izahay amin'ny alàlan'ny fampiasana marika famantarana sy marika amin'ny lalana mba hahafantarana sy hampahatsiahivana ireo mpampiasa fa ny fizarana dia tokony zarain'ny mpitondra môtô, ny bisikilety ary ny mpandeha an-tongotra.
Te hamporisika ny rehetra aho mba hitandrina hatrany ary haka ny fotoanantsika mandritra ny fampiasana ny arabe. Vao herinandro vitsivitsy lasa izay, dia voafetra tamin'ny andro sy ora fivezivezena izahay ary toa nahavita. Andeha isika hanohy hampiseho faharetana mitovy amin'izany, handamina ny androntsika hampihena ny fotoana eny an-dalana, ary hanohy hizara ireo lalana amin'ireo izay mety mandeha, jogging, na bisikileta hivezivezy na hanao fanatanjahan-tena fotsiny.
Tsy nikasika ireo faritra rehetra aho fa tiako izany nisongadina ny maha-zava-dehibe ny asa E-Government Services Unit, indrindra mandritra io vanim-potoana io. Nanome fanampiana ny governemanta, manerana ny masoivoho sy ny sampana izy ireo.
Nandritra ny toeram-pialofana dia nametraka vahaolana teknolojia maromaro manerana ny governemanta ny ekipa EGov:
Ny fitaovana fanombantombanana tena Covid-19;
Ilay mpanampy Chatbot an'ny tranokala gov.ky/coronavirus; SY
Ny fizarana amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra ny isa ESID amin'ireo olona manana fahazoan-dàlana hamily fiara hamela azy ireo hanavao amin'ny Internet miaraka amin'ny vavahadin-tserasera mpampiasa.
Ny ekipa E-Gov dia miara-miasa amin'ny Departemantan'ny Serivisy Computer sy ny mpivarotra amin'ny famoahana vahaolana e-varotra maromaro amin'ny volana Jolay. Anisan'izany ireto:
Fampiharana an-tserasera ho an'ny Centre for Business Development izay ahafahan'ny orinasa madinika sy kely mangataka fangatahana fanampiana na findramam-bola;
Rafitra an-tserasera hanamorana ny fandefasana entana havoaka amin'ny Gazety;
Serivisy fanampiny amin'ny Internet ho an'ny DVDL toy ny fisoratana anarana vaovao sy famindrana fiara; SY
Rafitra an-tserasera hanohanana ny fandefasana ny fangatahana ho an'ny fanatontosana ny zom-pirenena anglisy ary ny fisoratana anarana ary ny porofom-pirenena.
Ity areti-mandringana COVID-19 ity dia nitondra ny maha-zava-dehibe ny serivisy nomerika sy ny toekarena nomerika. Na dia nahazo tombontsoa lehibe tamin'ny ezaka natao hatramin'ny daty misy aza izahay amin'ny serivisy an-tserasera, dia nanjary nahafantatra bebe kokoa ireo fahafaha-manao / banga lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny nomerika, olona iray manan-danja ny tsy fisian'ny rafitra famantarana ny firenena.
Ny vaovao tsara dia ny ekipan'ny E-Gov izay niasa tamin'ity rafitra ity sy tetikasa vitsivitsy hafa. Ny ekipa dia nanao fandrosoana izay hampandroso ny Nosy Cayman amin'ny lafiny toekarena nomerika miaraka amin'ny fampiharana ny rafi-pandrefesan'ny mponina sy ny rafitra ID nasionaly.
Ny ekipa dia niasa tamin'ny fividianana karazana serivisy, fitaovana, rindrambaiko ary fanohanana mifandraika amin'ny rafitra ID. Vinavinaina fa hamoaka ny kara-panondrom-pirenena manomboka amin'ny telovolana faharoa 2021 io.
Ny fiankinan-doha lehibe hanatanterahana izany - ny famitana ny rejisitry ny mponina; manohana ny lalàna sy ny fizotry ny fividianana.
Ny Rehisitry ny Mponina dia mbola eo am-pelatanana amin'ny famoahana amin'ny telovolana fahefatra amin'ity taona ity miaraka amin'ny ankamaroan'ny vahaolana teknika napetraka sy vonona ankehitriny.
Alohan'ny hikatonako dia tiako ny misaotra ny ekipa E-Government sy ny sampan-draharaha misahana ny serasera amin'ny alàlan'ny fanohanana ny governemanta amin'ny serivisy tetezamita amin'ny Internet. Isaorana betsaka ihany koa ny mpiasan'ny Ministera rehetra tamin'ny fanoloran-tenany hanompo ny mponina amin'ireo Nosy ireo. Na eo aza ny toe-javatra niasanay, mbola manome 100% ihany izy ireo.
Fananganana faharetana amin'ny fizahan-tany hivoatra amin'ny "Normal Vaovao"
Ny manampahefana momba ny fizahan-tany Saodiana dia mandefa ny fampielezan-kevitra amin'ny fahavaratra Saudi Arabia